QEERROO FI QARREEN QAROODHAA !!! QAROON BIYYAA HEGAREEDHAA !!! « QEERROO
Sochiin warraaqisaa Ummata Oromoon Biyya keessaa gaggeeffamaa jiru guyyuu jabaachaa deemaa jira. Toftaa fi tarsiimoon barbaadamus akkasuma. Qabsoon Oromoo jabaachaa deemuun, qaama sadii uumuun haqa.
Qabsoon sabasaa jabaachutti ka gammadu.
Diina qabsoo Oromoo sodaatu
Isa gidduu mumunyuuquu ykn hinaaffuuf, dhiphuu itti uumuun waa hin oolle.
Dhugaan jiru Garuu, Qabsoon kun wareegama ulfaataa gaafataa waan jiruuf, xiyyeeffannaan isaa,isa 1ffaa qofaaf taati. Kun filannoo miti. Waan lubbuuti. Waaan jiraachuu fi dhabamuuti. Akka dhuunfaatti osoo hin taanee akka sabaatti kan herreegamu. Kanaaf filannoo tokkicha qofaaf tarkaanfataa jirra. Waan lubbuun itti wareegamtee ammo, bakka isaaf maluu odoo hin ga’iin hin dhaabbatu. Kana dhugeessuuf har’aa Qeerroo fi Qarree wabii waammachuun rakkisaa miti. Qeerroo fi Qarreen sochii har’aa taasisaa jiran, dantaa adda addaaf sharafanii akka barbaadanitti qajeelchaa hin jiran. Dhugaa saba OROMOO qofarratti hundaa’anii wareegama baasaa jiru. Ummata isaaniitti kabajaa itti horaa jiruu. kanaaf Ummata Oromoo guutuurraa amantaa argatanii murannoo guutuudhaan tarkaanfachaa jiran
Sochiin Qabsoo Oromoo har’aa bakka maraa argaa fi dhaga’aa jirru, akkasumas ummati itti boonaa jiru, sochii itti yaadamee fi saganteeffamee, akkasumas kaayyoo fagoo kan qabuu ta’uu hunda caalaammoo naamuusaan gan gutamee ta’uunsaa , Ummataaf abdii guddaa ta’eera. Kanaaf wareegama ijoollee isaa Gootummaan faarfataa jira . humna qaroo ta’een gaggeeffamuun sochii kanaa ummataaf abdii ta’eera . Qabsoon har’a argaa jirru akeekaa fi galii isaa gidduu galeessa ka godhatee, eenyufillee jedhee kan hin jarjarree, eenyuuf jedhees kan hin harkifannee, dantaa siyaasaa Oromoo har’aa fi hegaree herreeggatee ka tarkaanfatu ta’uu guyyu taajjabaa jirra. Diinni irriiba dhabee qabsoo saba Oromoo bilchinaan tarkaanfataa jiru gara ofii barbaadutti jal’isuuf irriiba itti dhabuus, gonkumaa akka hin dandeenye mirkaneessee jira. Qaroon Biyyaa waan hundee isaa tolchee tarkaanfatu karaa irraa osoo hin jal’annee, siyaasa addunyaa keenyarratti hin argamnee ta’ee irraa dubbatamuu irra ga’ee jira.
Kaleessa Qeerroon hundeeffamee yeroo qabsoo isaanii tokko jedhan, namoonni hedduun waan eegalamee boruu baduuf amma maal godhuu ? ykn waliin hin hiriirruu ykn waliin hiriiruuf mamii guddaa keessa turre. Sun hundumtuu har’aa habjuu ta’eera. Akka tilmaama namoota adda addaa osoo hin taanee, sochiin gaafas itti seenamee kan warra qaroo taatee, kunoo, ADDUNYAATTI dhageetti guddaa argachuu fi Anga’oota yaaddeessitee Angoo irraa akka baqatan taasisaa jira. Sochiin Qeerroo fi Qarree kaleessa Qabsaa’oota muuxannoo ga’aa qabaniin gadi fageenyaan irratti hojjatanii yeroo hojiitti seenan, Ijoolleen gadi baatee iyyitee manatti galtii jechaa turre. Har’a garuu ijoolleen tuffannuu sun, qabsoo Oromoo sadarkaa amansiisaan dhaaltee Qabsoo Oromoof furmaata taatee jirtii. Ijoolleen qaroon kun, hegaree Oromoo kaayyeeffatanii socha’aa jiran, wareegama nuuf baasan kabajuu dhiifnee har’allee, hiriira isaan keessaan waammatanii Ummata seenaa hojjachiisaa jiran jalaa tuffachuun dhugumatti nama gaddisiisa. Warri of jaallatan Qeerroo fi Qarreen wareegama waan itti baasan qofaa gabaasuuf wal nyaatu. Bakka akkasii nu ga’ee ykn magaalaa akkasii irraa nu ga’ee jedhanii ittin Ummata sobuu barbaadu. Ijoolleen sun garuu lubbuu itti dhabaa jirtii.
Sochiin arrabaa fira fakkaattootaa mitii, humni diinaa amma funyaanitti hidhateyyuu Qabsoo Qeerroo fi Qarree akka hin dhaabnee, duubattillee akka hin daabifnee diinatu qalbifatee jira. Qeerroo fi Qarree Qaroon, hegaree firaa mitii diinaayyuu hubachiisaa jiran. Qeerroo fi Qarreen , of keessattis ta’uu gara alaatti qaroodhaa.galiin isaanii tokkichadha. Mirga guutuu Ummata isaaniitii. Qarree fi Qeerroo gonkumaa abshaalummaan diinaa kamiitu isaan hin dogogorsu. Gootoonni isaan ijaaran warra qabsoo dheessee galee miti. Warra jireenya filatee mitii. Warra kachachalummaan kaayyoo gurguree miti. Warra cichoomiinaan kaayyoo asiin ga’aniidhaa. Warra dantaa fi angoon isaan hin moonee, murattoota sabaatu isaan ijaaree. Kanaaf ijoolleen kun akka sibiilaa jabaattee. Diinnis ABO diiguuf umurii isaa guutuu itti ifaajjee akkuma dadhabee, waan ABOn ijaarees diiguu akka hin dandeenye beeku. Wanni diina caalaatti sodaachiisaa jiru isa kanaadha. OPDOn isaaniif kan harka laattee fakkaattee, isaanitti dhimma ba’uuf yaaddii taanaan dhiisuutuu tolaaf. Polisiin Oromiyaas keessa qeerroo qabachuuf ykn boruu Qeerroomatti dhimma ba’uuf yaadani taanaan , osoo itti hin kasaarree dhaabbachuu qabu. Akkasuma wayyaaneen Jaarsummaa karaa Maanguddoos ta’ee, kkf Qeerroo dhaabuuf yaadu taanaan, Qabsoo daran hammaataa dhoosuuf deeman. Ijoollee QAROO kana gonkumaa dhaabuun hin danda’amu.
Wayyaaneen bifa hedduun socha’aa jirti. Qeerroo ka dhuunfatu gama hundaan uummachuuf yaalaa jirtii . kun gonkumaa hin taatu. Anga’oonni qabsoo Oromoo dagachiisuuf Angoo irraa harca’aniis, sochiin Qeerroo fi Qarree dantaa Oromoo galmaan ga’uu irratti hundaa’ee gonkumaa hin dhaabbatu. Shirri warra Qaroo kana naaffisuu miti, akka yaada hiran taasisuu hin jiru. Mirga ofii dabarsanii kennanii mariin taa’amuu hin jiru. Wayyaaneen waggaa 27 guutuu haaromsaa nuun jettee jirti. Haaromsii kana boodaa hin jiru. Wal ga’ii yaamanii yaada keessaan bilisaan dubbachaa ykn akka fedha keessanii hiriira ba’aan gonkumaa Qeerroo fi Qarree akkasuma lafee duddaa isaanii kanneen ta’an Qabsaa’oota gonkumaa duubatti hin deebisu. Ittis hin dagaman.
Qarree fi Qeerroon Ummata ijaaranii waamichaa fi lallabbii tokko maleetti hirriiri Mormii Biyya keessatti gaggeessaa jiran, diinni gonkumaa waan kana tu’achuu akka hin dandeenye amansiiseera. Warra Qeerroon nu harka jira jedhanii maallaqa walitti guuraniis, duwwaa ta’uu isaanii mirkaneessee jira. Kanaaf Qeerroo fi Qarreen Qaroodhaa jenne. Toftaan diinni bira ga’uu hin dandeenyee tarrifamanii jiru. Eenyullee osoo hin beeknee Ummati Oromoo yeroo barbaadetti Biyya Abbaa isaa dhuunfachuu danda’aa. Garuu waan dursuu qabu hundumtuu dursuu qaba. Ummati qabsoo kana keessatti of qorachuu qaba. Irree isaa akka dansaatti itti amanuu qaba. Jaalala waliif qabaachuu qaba. Waliif birmachuu hojii guyyuu godhachuu qaba. Hadhaa fi mi’aa qabsoo dachee ofiirraa akka dansaatti adda baasee beekuu qaba. Akkatti of ittisu beekuu qaba. Naamuusaa fi abboomamuu beekuu qaba. Firaa fi diina adda baafatee beekuu qaba. Waa hundaa adda baafatee muuxeffachuu qaba. Adeemsi warra Qabsaa’ootaa baroota itti fudhatanii hojjatanii fi Qeerroo fi Qarreen dhugoomaa jiru isa kana.
Warri qabsoon harkifatee jedhan kana booda mee haa dubbatan. Dhugaa yeroo fudhatee kana haa amanan. Waan hundeen isaa tolee hunda hamalchiisaa jiran kanammoo simachuu qaban. Qeerroo fi Qarreen Qaramaniiru. Diinarra tarkaanfachuu baraniiru. Miliquu fi balaa buusuu baraniiru. Lammii baraaruu fi ijaaruu baraniiru. Kan itti aanuu isaantu beeka. Waan isaan yaadan onnee Ummataa keessa jira. Isaaf of haa qopheessinu. Dhugaan dhihaattee jirtii.Sochiin opdo har’aa maddi isaa Qeerroo fi Qarreedhaa. Maddi Qeerroo fi Qarree ammo , Abbaa Qabsaa’oota kumaatamaatii. Waan ganama toleetu galgala toluuf jiraa liqimsaa ykn amanaa !!!Qabsoo Oromoo sadarkaa itti aanutti ceesisuuf of qopheessaa . diinni carraa laatameefitti fayyadamuu yoo didee, kadhaa isaa hin dhaqinuu. Diinnis ta’ee qaamni kamiyyuu waan gochuuf deemu hundaa, qabsoo Oromoo tilmaama keessa kan galchuu yoo ta’ee qofaadhaa. Araarri jiraatus dhiisuus, waliin dubbachuun jiraatus dhiisuus, qabsoo amma Ummati itti jiruu laaffisuuf shirri barbaadee saganteeffamuus, Sochiin Qarree fi Qeerroo galii isaa irraa hin maqu. Jaarsummaa fi Maanguddummaan hin dhaabbatu. Wayyaanee haaromsuu ykn OPDO haaromsuun kan furamuu miti. Tokko fi tokko . wayyaanee Angoo irraa buusuudhaa ! Mirga Hiree murteeffannaa Ummata Oromoo fi cunqurfamtootaa mirkaneessuudhaa. Abshaalummaan Habashootaa fi warra Habashootaaf jilbeenfatanii raawwateera. Itoophiyaan jiraachuu fi dhiisuu, Ummatootatu murteessaa. nagaa isaaniitu dhugeessa. Kana Qeerroo fi Qarreen kan jedhaa jiran. Taphi siyaasaa kaaba keessa wawwaattu xumuramtee jirtii. QAROON YEROO HUNDAA GALIIN ISAA HEGAREEDHAA. Hegaree keenyaa diinaaf dabarsinee hin kenninuu jabaadhaa .
« Guyyaa Kaleessaa Qeerroon Bilisummaa Bifa Kanaan FXG Gaggeessaa Oolan.
Onko 16,2017 Wallagga Ukkee Qarasaa, Diddaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo »
Pingback: QEERROO FI QARREEN QAROODHAA !!! QAROON BIYYAA HEGAREEDHAA !!! – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA